Waa maxay noocyada caymiska baabuurta ee shirkaduhu jiraan? | Dhaqaalaha Dhaqaalaha
Waa maxay noocyada caymiska baabuurta ee shirkaddu leeyihiin?
Encarni Arcoya | 08/06/2021 11:29 | La cusbooneysiiyay 14/06/2021 10:58 | Caymiska
Caymiska baabuurtu waa mawduuc milkiile kasta oo baabuur sifiican u yaqaan. Si kastaba ha noqotee, markaad leedahay shirkad gawaarida ama noocyada kale ee gawaarida shirkadda loo isticmaalo, waxay qaadaan caymis gaar ah, oo loo yaqaan caymiska baabuurta shirkadda.
Laakiin maxay yihiin caymiskaasi? Nooc noocee ah ayaa jira? Sidee loo xisaabin karaa? Ma jiraan faa'iidooyin ka badan kan caymiska baabuurta ee caadiga ah? Waxaan kuugu sharaxeynaa hoosta.
1 Waa maxay caymiska baabuurta ee shirkaddu
2 Noocyada caymiska baabuurta ee shirkadda
2.1 Caymiska raxan raxan
2.2 Caymis kala duwan oo isla maraakiibtaas ah
3 Sida loo xisaabiyo caymiska baabuurta
4 Faa'iidooyinka caymiska gawaarida shirkadda
Waa maxay caymiska baabuurta ee shirkaddu
Guud ahaan, caymiska baabuurta ee shirkaddu waa hab lagu ilaaliyo taas gaari leh adeeg xirfadeed, taasi waa, in loo adeegsado in lagu qabto shaqo. Maaha mid lamid ah caymiska gaarka loo leeyahay, tusaale ahaan kan aad ku haysato gaarigaaga ama mootadaada, sababtoo ah uma adeegsanaysid shaqo, laakiin waxaad ugu adeegaysaa safar, firaaqo ... si kale haddii loo dhigo, adeegsi shaqsiyeed.
Caymiska noocan ah ayaa leh xaalado ka duwan kuwa la yaqaan iyo waliba shuruudo kala duwan Taasi waxay ku xirnaan doontaa nooca la doortay (maadaama ay jiraan fursado dhowr ah). Laakiin ka hor intaadan ka hadlin noocyada caymiska baabuurta ee shirkadaha, waa inaad ogaataa gawaadhida noocee ah ayaa tan caymis lagu gelin karaa. Guud ahaan, waad hubin kartaa:
Gawaarida shirkadda. Taasi waa, gawaarida rakaabka ee shaqaalahaaga ama maamulayaasha shirkadaadu u adeegsadaan inay awoodaan inay qabtaan shaqada. Halkan waxaad sidoo kale ku dari kartaa gawaarida waaweyn ama gawaarida waaweyn maxaa yeelay waa gawaari loo isticmaalo gudbinta, gaadiidka, adeegga farsamada ...
Mashiinno. Waxaan ka hadlaynaa gawaarida makiinadaha, oo waliba leh caymis.
Gawaarida waaweyn iyo kuwa culus. Waa gawaari, duruufaha jira awgood, ugu baahan caymis gaar ah iyaga.
Doomaha. Ugu dambeyntiina, waxaad leedahay caymiska gawaarida shirkadda ee "maraakiibta", oo aad u fahmeysa sida tiro badan oo gawaarida shirkadda ah Tusaale ahaan, shirkadda basaska, waxay lahaan karaan kuwo badan oo dabooli kara jidadka kala duwan.
Noocyada caymiska baabuurta ee shirkadda
Nidaamka caymiska ee gawaarida shirkadda, waxaan ka helaynaa laba nooc:
Caymiska raxan raxan
Iyagu waa mid ka mid ah xulashooyinka ugu badan ee shirkaduhu doorteen maaddaama ay ku sifoobeen inay ku koobaan dhammaan gawaarida shirkadda hal qandaraas. Sidan oo kale, nooc caymis oo ku saleysan caymis ayaa la doortaa, isagoo awood u leh inuu doorto gacan saddexaad, qof saddexaad oo la dheereeyey ama caymis khatar buuxa ah
Iyo caymis noocee ah ayaa ugu badan? Hagaag, waxay noqon karaan dariishadaha, xatooyada, dabka ... Runtu waxay tahay in shirkadaha la siiyo dabacsanaan weyn maxaa yeelay waxa ay ku saabsan tahay waa inay abuuraan caymis daboolaya baahida gaari kasta.
Sida a peculiarity, taasi waa taas dhammaan siyaasad-dejiyeyaasha baabuurta waa in la hubiyaa, taasi waa, qof kasta oo isticmaali kara mar uun. Xitaa gawaarida shirkadaha kirada baabuurta, isla sidaas ayaa la sameeyaa.
Caymis kala duwan oo isla maraakiibtaas ah
Ikhtiyaar kale oo ka mid ah noocyada caymiska shirkadaha ayaa ah in caymis lagu sameeyo baabuur kasta sida uu u adeegsado. Waxay ku dhex jiri lahaayeen isla maraakiibta, laakiin mid kastaa wuxuu lahaan doonaa xaalado u gaar ah iyo dabooliddiisa.
Es aad ugu eg caymiska shaqsiga, laakiin leh faa'iidooyin gaar ah, gaar ahaan haddii ay tahay tiro badan oo gawaari ah oo caymis la gelinayo. Dabcan, xaalado badan siyaasad-dejiyeha iyo milkiilaha caymiska labaduba waa "qof" isku mid ah, oo ku dhici kara magaca shirkadda.
Sida loo xisaabiyo caymiska baabuurta
Kahor, si loo xisaabiyo caymiska baabuurka ee caymiska, waa inaad tagtaa xafiis si ay uga faalloodaan xulashooyinka kala duwan, daboolidda oo ay kaaga dhigaan qiyaas ahaan qiimaha caymiskaas. Si kastaba ha noqotee, tikniyoolajiyadaha cusubi waxay suurtogeliyeen in tan laga tago oo lagaa dhigo inaad adigu hawsha fuliso.
Si aad u sameyso, waa inaad gal bogga caymiska adiga xiisaha kuu leh iyagaana yeelan doona foom ama qayb ka mid ah, iyada oo loo marayo dhowr tallaabo oo aad ku go'aamineyso nooca caymiska aad rabto, gawaarida iyo caymiska, waxay ku siin doonaan natiijo kama dambeys ah (mararka qaarkood shaashadda, mararka kale emaylkaaga) oo leh qiimaha la qiyaasay. Tusaale ahaan, caymiska baabuurta waa la xisaabin karaa Halkan.
Waxa dadka kale sameeyaan waa inay kugu soo wacaan taleefan si ay kula taliyaan oo ay u eegaan haddii aad xiiseyneyso caymis. Xaaladahaas, waxay mararka qaarkood hagaajin karaan qiimaha ay ku siinayaan khadka tooska ah, ama way ka jilicsan yihiin. Sikastaba xaalku ha ahaate, xisaabintaan waa mid kumeelgaar ah, tan iyo markii dambe waad qiimeyn kartaa inaad ku darto caymis dheeri ah iyo inkale, sidaas darteed, waxaad leedahay caymis baabuur oo dhameystiran.
Faa'iidooyinka caymiska gawaarida shirkadda
Ka fiirsashada haysashada caymiska baabuurka ee shirkadda, ha ahaato raxan ama yaanay ahayn, waxay u horseedi kartaa faa'iidooyinka shirkadda qaarkood. Mana aha wax la mid ah in caymis hal gaari laga sameeyo in la sameeyo illaa 20 gaari. Caymisyadu waxay u muuqdaan inay Bixiyaan kayd aad u badan tirada caymiska la qandaraas siinayo, mararka qaarkood ilaa 40% ama in ka badan oo ku saabsan qiimaha waxayna kuxirantahay caymiska qandaraaska lagu qaatay.
Waxay yeelan karaan caymisyo badan sida caymiska shaqsiyeed; ama aad leedahay caymis badan maxaa yeelay isticmaalka la siinayo gaari gaar loo leeyahay lama mid aha gaariga shirkadda.
Caymiska ayaa ka dabacsan. Caymiska shirkaddu wuu ka dabacsan yahay maxaa yeelay wuxuu la jaan qaadayaa astaamaha ganacsiga, tirada gawaarida iyo xaaladaha ay tahay inuu lahaado (haddii uu jiro caymis wadayaasha kala duwan, kaalmada waddada, bedelka gaariga ...).
Nidaamyada ayaa loo habeeyay. Shirkaduhu badanaa ma sameeyaan hal shirkad caymis baabuur; dhowr samee. Maamulkana waxaa lagu fuliyaa, marka laga reebo, siyaasad keliya.
Waxay qandaraas ku qaadan karaan khadka tooska ah. Macasalaamee inaad waqti qaadato inaad aado xafiis; hadda waxaad iyaga ka heli kartaa internetka oo aad maamuli kartaa wax walba.
Dayactirka caymiska. Waxay u dhigayaan qashin qaadista aqoon isweydaarsiyada caymiska ee astaanta, ama shirkadda caymiska lafteeda, habkaas oo haddii ay dhibaatooyin ka jiraan gaariga, ay aadaan aqoon isweydaarsiyo takhasus leh oo leh qalab dayactir asal ah
Miyaadan u maleyneynin inay mudan tahay inaad wax ka ogaato caymiska gaariga shirkadda oo aad bilowdo inaad keydiso?
Wadada buuxda ee maqaalka: Dhaqaalaha Dhaqaalaha » Alaabada maaliyadeed » Caymiska » Waa maxay noocyada caymiska baabuurta ee shirkaddu leeyihiin?
Muxuu yahay Model 130
Sida loo helo warbixinta nolosha shaqada ee shirkadda